Rakanga rakapfeka zvinovhara kumeso Towels, Baby Towels, Royal Velvet Towels, negumbeze Manufacturer - Bailixin
Kunyudza munyika oga oornag musha Whitehead Textile pamwe kambani yedu! Tinopa matauro uye magumbezi mhuri imwe neimwe ari musoro mitengo.
Click uye dzidza pamusoro pedu
yakaziviswa kuunganidza yedu nyoro bhati tauro rinovira, inotonhorera microfiber mutambo tauro rinovira uye Beach matauro, fashoni kicheni tauro rinovira uye mubhedha jira set.Comprehensive hanya utano hwako.
Zero monyorora rwebhuruu Series
Absorção de Água In 3s No Fluorescent Agent, zvakatipoteredza Friendly
High-Quality America Cotton rwebhuruu
Four-rukoko Gauze bhurangeti
Akangwarira rakarukwa Technology
Kusarudza Kwaungaita Towels
Kunotenga matauro chinhu touchy muitiro. Chokwadi, unoda kutenga matauro kuti vanonzwa nyoro uye youmbozha, asi chii 'giremu count' rinorevei chaizvo? Uye sei iwe mutsauko pakati Turkish donje uye donje muEgipita kana kunhonga kubva muraraungu une mavara uye mapatani? Usati umurashire tauro Nekukurumidza, tora imwe nguva yokuverenga yedu batsira mutungamiriri pazasi. Takaona vakaungana uye dzikarongwa zvose unofanira kuziva sei kusarudza matauro kupinda shanu dzinokosha mhando, kubva pakukura uye uremu kuti kuvakwa, saka kuti kutsvaka kwako achaenda sezvo zvakanaka sezvinobvira.
Kuwacha With Zvakawandisa sipo
Sei chinhu dambudziko: Kunyanyisa sipo kunogona kuomesa matauro. Plus, hazvina basa. "Towels atova yekubata sipo residual kubva miviri yedu, uye nokuti tiri kushandiswa aome ganda yakachena, havaiti dzine kuti tsvina zvikuru," anodaro Donna Smallin Kuper, vaipupurirwa imba rokuchenesa mukoti uye munyori Cleaning Plain & Simple. Solution: Shandisa hafu sipo ungada kuti kuipa kushamba, kana skip nayo "Vaviri ose crow uye akarurama kushandisa vhiniga," anodaro Carolyn Childers, mukuru musha mukuru Handy ..
A Guide kuna Kutenga Blankets
Kana usiku tembiricha kutora koromoka, kusvika kuti negumbeze kuti kuwedzera imwe paiva unodziya ushamwari panhovo dzako. Magumbeze vanowanzotevedzera kuenda zvisingaoneki uye unsung - zviri munyaradzi yako kana duvet kuti zvinoda pamusoro Billing sezvo nyeredzi pamubhedha, uye machira ako kuti anopa kurezva pakati softness ganda wako, asi jira, tucked pakati vaviri, kuti pave imwe homwe mhepo akuchengete kudziya. Kana totaura kutenga negumbeze ungafunga ikoko '.
Kubatsira Kusarudza munhu Bamboo negumbeze
Wati wambonzwa chimwe yemishenjere negumbeze? Zviri rakanakisisa chigadzirwa kuti inopa mijenya okunyaradza. magumbeze izvi zvinoitwa kubva Ultra nyoro yemishenjere faibha chinoita somufaro zvikuru kuti snuggle in.Bamboo gumbeze Zvinosarudzwa vazhinji nokuda softness wayo kuti inopa kunowedzerwa nyaradzo. Bamboo Inozivikanwa nokuda kwayo antibacterial ehupfumi. Rine yemishenjere Kun, inova dzinongoitika antibacterial mumiririri. It anokwanisa kuuraya utachiona uye tupukanana kuti pozi kwakakura kuti utano.
kugadzirisa North Side pamusoro Xiaoyi River, Logistic Industrial Zone, Hongrun Street, Gaoyang County, Baoding, Hebei, China (Mainland)